“Ardayda Jaamacada Gabiley Xumaan uma hayaan madaxweynaha ee waxay ka cabanayaan Komishanka” | Somaliland.Org
“Ardayda Jaamacada Gabiley Xumaan uma hayaan madaxweynaha ee waxay ka cabanayaan Komishanka”
November 15, 2012	Gabiley (Somaliland.Org)- Wasiirka warfaafinta, dhaqanka iyo wacyi-gelinta Somaliland Md. Abiib Diiriye Nuur (Abiib Timocad) iyo Xildhibaano ka tirsan Golaha wakiiladda ayaa xalay shir la yeeshay ardayda Jaamacadda Timacadde oo shalay magaalada Gabiley ka dhigay banaan-bax lagaga soo horjeeday komishanka doorashooyinka.
Ardaydu waxay sheegeen in Komishanku ka qadiyay ardayda Jaamacadda Timacade ka qeyb qaadashada hawl wadeenadda komishanka ee goobaha codbixinta doorashada deegaanka. Taasi oo ay sababeeyeen mudahaaraadkoodii shalay.
“Ardayda Jaamacadda Timacadde ee Gabiley waxay noo sheegeen in madaharaadkoodii ay kaga cabanayeen Komishanka doorashooyinka, hase yeeshee aanay wax xumaan ah u haynin madaxweynahooda iyo xukuumadda Somaliland oo ah tii ay iyagu doorteen,”ayuu yidhi Wasiirka warfaafinta oo maanta u waramayay saxaafaddu.
Wasiirka warfaafintu waxa uu intaasi ku daray “Waxaanu ardayda isla qaadanay sidii wada jir cabashadaasi loogala hadli lahaa komishanka doorashooyinka. Waxaanan qabaa inay arrintaasi iska dhammaanayso. Waxay ardaydu noo muujiyeen inay taageersan yihiin xukuumadooda waxna u qabin.”
Sidoo kale, waxa halkaasi ka hadlay Xildhibaan Ibraahim Axmed Haybe, Md. Xasan Cawaalle Caynaan iyo Md. Cabdilaahi Ismaaciil Cigge (Balaaki) oo sadexduba ka soo jeeda gobolka Gabilay kana tirsan golaha Wakiiladda waxaanay ardayda Jaamacada ugu mahad celiyeen siday cabashadooda u gaadhsiiyeen.
Waxa kale oo iyaguna ka hadlay shirkaasi xubno ku hadlayay magaca ardayda jaamacadda Gabiley waxaanay komishanka ku eedeeyeen inuu jaamacadooda ka reebay jaamacadaha ardaydoodu ka hawl-gelayso goobaha codbixinta doorashada deegaanka ee dalka ka dhici doonta 28-ka Bishan.
Waxay ardaydu u mahad celisay Wasiirka warfaafinta iyo Xildhibaanada Golaha wakiiladda ee kulanka xog waranka ah la yeeshay.
Previous PostDadweynaha Gabiley oo si xamaasad leh u soo dhaweeyay Madaxweyne SiilaanyoNext PostWeerar keenay dhimasho daran oo Marinka Qasa iyo Israa’iil ka dhacay	Blog